१९९० सालको महा-भूकम्पमा गएको ठुलो पहिरो रोकिएन अझै सम्म » खबरहरुको एउटै केन्द्र
१९९० सालको महा-भूकम्पमा गएको ठुलो पहिरो रोकिएन अझै सम्म
मंगलवार, जेष्ठ २२, २०७५ १४:४५ मा प्रकाशित !
२२ जेठ, जिल्लाको उत्तर पूर्वमा रहेको मार्मा गाउँपालिका र अपी हिमाल गाउँपालिकालाई सडक सञ्चालनमा जोड्न समस्या देखिएको छ ।
मार्मा गाउँपालिका-३ मा १९९० सालमा गएको रिल पहिरोका कारण मार्मा र अपी हिमाल गाउँपालिकामा यातायात सञ्चालन गर्ने कार्य प्रभावि भएको हो । १९९० सालमा गएको भूकम्पका कारण उक्त क्षेत्रमा ठूलो पहिरो खसेको थियो ।
पहिरो पन्छ्याएर सडक सञ्चालन गरेपनि रिल पहिरो क्षेत्रमा निरन्तर ढुंगा माटो खसि रहेकोले नियमित यातायात सञ्चालन गर्न समस्या भएको छ ।
मार्मा गाउँपालिकाको लटिनाथ हुँदै पारीबगड भन्दा अगाडि अपी हिमाल गाउँपालिका सीमासम्म सडक पुग्नै लागेपनि रिल पहिरो क्षेत्रमा खसेको पहिरो नरोकिदा नियमित यातायात सञ्चालनमा समस्या भएको हो ।
पारीबगड सडकखण्ड अन्तरगत विभिन्न क्षेत्रमा पहिरो खस्ने भएकाले वर्षतमा झन समस्या हुने गरेको छ ।
अपी हिमाल गाउँपालिका र मार्मा गाउँपालिकाका स्थानीयहरु आवत्जावत् गर्ने मुख्य मोटर मार्ग बिटुले पारी-बगड सडकखण्ड अन्तरगत कच्ची भू-बनोटका कारण विभिन्न क्षेत्रमा पहिरो खस्ने गरेकाले बेला-बेला स्थानीय पैदल यात्रा गर्न बाध्य छन् । उक्त सडक सञ्चालन भएपछि मार्मा गाउँपालिका र अपी हिमाल गाउँपालिकाका स्थानीयहरुलाई सहज भएको छ । तर, नियमित सञ्चालन नहुदाँ समस्या हुने गरेको मार्माका एक स्थानीयले बताए ।
बिटुले-पारीबगड सडकखण्ड अन्तरगत पर्ने रिल पहिरो यस सडकखण्डका सवारी चालकहरुको टाउको दुखाइको विषय बनेको छ ।
मुख्यगरी वर्षातका बेला पहिरो खस्ने गरेपनि सानासाना पहिरो बाहै्रमहिना आउने गरेको स्थानीय मनोज महराले बताए । वर्षौ पहिले ठूलो पहिरो खसेको उक्त क्षेत्रमा पहिरो खसिरहने भएकाले पनि त्यस क्षेत्रको नाम नै रिल पहिरो रहन गएको बुढा पाकाहरुले बताउँछन् ।
१९९० मा आएको भूकम्पका कारण खसेको मार्मा गाउँपालिका-३ को उक्त पहिरो अहिले पनि बेलाबेला खसिरहन्छ ।
१९९० सालको भूकम्पले ठूलो पहिरो गएको र निरन्तर रुपमा पहिरो खसिरहने भएकाले उक्त पहिरोको नाम रिल पहिरो रहन गएको मार्मा गाउँपालिका वडा नम्बर २ का वडाध्यक्ष अमर विष्टले बताए ।
रेल अर्थात् ट्रेन चले जस्तै निरन्तर रुपमा पहिरो खस्ने भएकाले पनि रेल पहिरोबाट पछि रिल पहिरो भन्न थालिएको वडाध्यक्ष अमर विष्टले बताए ।
यस्तै पहिरो खसेको नजिकैको गाउँको नाम रिल भएकाले पनि रिल पहिरो नाम रहन गएको वडाध्यक्षको भनाइ छ ।
थोरै वर्षा भएपनि पहिरो खस्ने त्यस क्षेत्रमा हावा चल्दासमेत पहिरो खस्ने गरेको स्थानीयो भनाइ छ । बाह्रै महिना पनि पहिरो खस्ने भएकाले त्यस क्षेत्रमा आवत्जावत् गर्न जोखिम रहेको गाडी चालक देबसिँह कोट्टारीले बताए ।
विहान पहिरो हटाए साँझ खसिसकेको हुन्छ । यसलेगर्दा सवारी साधन संचालन गर्न र नागरिकलाई पनि ढुक्क भएर गाडी चढ्न जोखिम छ ।
PREVIOUS POST Previous post: ज्वालामुखी बिस्पोटमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ६५ पुग्यो
NEXT POST Next post: अनटिफको तेस्रो साधारणसभाबाट नयाँ कार्य समिति चयन
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते मंगलवार, जेष्ठ २२, २०७५ १४:४५
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस मंगलवार, जेष्ठ २२, २०७५ १४:४५
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण मंगलवार, जेष्ठ २२, २०७५ १४:४५
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी मंगलवार, जेष्ठ २२, २०७५ १४:४५
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? मंगलवार, जेष्ठ २२, २०७५ १४:४५